Mmụta ụmụ akwụkwọ gụnyere mmụta mmụta ụmụ akwụkwọ na ikere aka ụmụ akwụkwọ. Mmụta ntozu ụmụ akwụkwọ ma ụmụ akwụkwọ ezutela ma ọ bụ gafere ọkwa ọkwa na atụmanya. Ntinye aka ụmụ akwụkwọ ma ụmụ akwụkwọ etinye aka ma mezue ntule ndị dị na steeti ahụ. Naanị ụmụ akwụkwọ na-etinye ihe dị ka afọ agụmakwụkwọ n&#39;ụlọ akwụkwọ ka agụnyere mgbe ha na-akọ akụkọ ụmụ akwụkwọ. (Isi mmalite data: 2018-2019 afọ akwụkwọ)
Kedụ ka ụmụ akwụkwọ dị na ụlọ ọrụ a si mee nyocha ndị dị na steeti ahụ dum?
Mmụta ntozu ụmụ akwụkwọ ma ụmụ akwụkwọ zutere ma ọ bụ gafere ọkwa ọkwa na atụmanya.
Asụsụ Bekee Mụta Nkụzi / Asụsụ
Klas nke 3-8
Nkezi Steeti 47.9%
Asụsụ Bekee Mụta Nkụzi / Asụsụ Klas nke 3-8
Ọsọ / agbụrụ
Nwa ojii / onye American-American
Hawaiian ma ọ bụ Pacific Islander
Ativemụ amaala America
Ndị Mmụta Bekee
Ike di elu
Njikọ ndị agha
Studentsmụ akwụkwọ nwere nkwarụ
Arụmọrụ n&#39;ime Ọnọdụ
Nkezi Steeti 47.8%
Mgbakọ Mathematiki Klas nke 3-8
Klas 4 na isii
Nkezi Steeti 47.4%
Nkà Mmụta Sayensị Klas 4 na isii
Ọkwa 10 (Biology)
Nkezi Steeti 38.6%
Nkà Mmụta Sayensị Ọkwa 10 (Biology)
Ọmụmụ Mmụta Ọmụmụ
Nkezi Steeti 46.0%
Ọmụmụ Mmụta Ọmụmụ Ọkwa 5
Nghọta N’ịgụ Ihe
Nkezi Steeti 87.3%
Nghọta N’ịgụ Ihe Ọkwa 3
Kedụ ka ụmụ akwụkwọ dị na ụlọ ọrụ a na-arụ ma e jiri ya tụnyere nyocha nwa oge nke steeti a maka asusu Bekee na Asụsụ Mgbakọ?
Ebumnuche nwa oge na-egosi ọganihu a na-atụ anya kwa afọ iji mezuo ebumnuche ogologo oge nke steeti.
Kedu ọkwa nke ogo ụmụ akwụkwọ nọ na ụlọ ọrụ a na-egosipụta?
Ihe nrịgo nwere akara aka na-acha akwụkwọ ndụ na-egosi ịgafe akara egosipụtara ihe ịga nke ọma nke ụkpụrụ na atụmanya ọkwa.
Asụsụ Bekee Asụsụ Bekee 3-8
Ihe ọmụmụ mgbakọ na Asatọ 3-8
Ihe omumu Sayensị 4 na 6
Sayensị Grade 10 (Biology)
English / Asụsụ Arts Grade 10
Kedu ọnụego ntinye aka na ụlọ ọrụ a na nyocha ndị steeti niile?
Ntinye aka ụmụ akwụkwọ ma ụmụ akwụkwọ etinye aka ma mezue ntule ndị dị na steeti ahụ.
Ntinye aka n&#39;asụsụ Bekee / Asụsụ
Nkezi Steeti 99.6%
Ntinye aka n&#39;asụsụ Bekee / Asụsụ Klas nke 3-8
Onu ogugu nke umu akwukwo ndi sonyere na uzo ozo Bekee
Nkezi Steeti 97.3%
Ntinye aka n&#39;asụsụ Bekee / Asụsụ Ọkwa 10
Pasent nke ụmụ akwụkwọ na-esonye na ntule Bekee / Asụsụ Bekee ọzọ
Ikere mgbakọ na mwepụ
Ikere mgbakọ na mwepụ Klas nke 3-8
Pasent nke ụmụ akwụkwọ na-esonye na ntule nke mgbakọ na mwepụ ọzọ
Nkezi Steeti 97.5%
Ikere mgbakọ na mwepụ Ọkwa 10
Nkezi Steeti 98.6%
Ikere Science Klas 4 na isii
Nkezi Steeti 84.4%
Ikere Science Ọkwa 10 (Biology)
Lelee Akụkọ Afọ Nlele Kwa Afọ (APR). https://media.doe.in.gov/apr/2019/f2400-standard.pdf
Mụtakwuo maka arụmọrụ ụmụ akwụkwọ na nyocha nke mba niile gbasara agụmakwụkwọ. https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
Mụtakwuo banyere ụmụ akwụkwọ ọta akara na Indiana. http://www.elacindiana.org/data/elac-annual-report-interactive-dashboard/